Ireo mpankafy baolina kitra dia mazoto indrindra amin'izany ary te hitrandraka fomba vaovao hahazoana fialamboly. Noho izany, raha iray amin'ireo karazana mpankafy ianao dia eo amin'ny toerana mety ianao. Eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe Mini Football Apk. Io no fampiharana Android farany, izay manome ny traikefa filokana Soccer tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa.
Ny baolina kitra dia iray amin'ireo fanatanjahantena tsara indrindra eran-tany. Antsoina hoe fanatanjahantena iraisam-pirenena ihany koa izy io. Amin’ity fanatanjahantena ity dia misy mpilalao iraika ambin’ny folo isaky ny ekipa. Noho izany, tsy misy afa-tsy tanjona roa lehibe ny ekipa rehetra, ny voalohany dia ny hanao baolina betsaka araka izay tratra ary ny faharoa dia ny fiarovana amin'ny fanafihan'ny ekipa hafa.
Toy izany koa, misy lalao esports samihafa novolavolaina ho an'ny mpankafy, izay ahafahan'izy ireo milalao sy mankafy traikefa amin'ny fotoana tena izy eny an-kianja. Saingy matetika, ireo fampiharana rehetra ireo dia misy sary avo lenta ary mifanaraka amin'ny fitaovana avo lenta ihany. Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana Android mahagaga ity ho anareo rehetra.
Manolotra ny traikefa tsara indrindra amin'ny lalao tena izy ho an'ny mpilalao hankafy ny fanafihana rehetra sy hiaro azy. Misy ny sasany amin'ireo ekipa tsara indrindra, izay tsy maintsy resenao ary ho ekipa ambony indrindra. Misy endri-javatra samihafa amin'ity fitaovana ity, izay ahafahan'ny mpampiasa miala voly. Hozarainay ny momba izany rehetra izany, aminareo rehetra. Noho izany, mijanòna miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary ankafizo izany.
Topimaso momba ny Mini Football Apk
Izy io dia rindrambaiko filokana Android, izay novolavolain'ny Miniclip.com. Lalao ara-panatanjahantena izy io, ka ny mpilalao dia mila mitantana ekipa baolina kitra ary mifaninana amin'ireo mpilalao hafa. Izy io dia lalao baolina kitra an-tserasera marobe, izay ho mpampiasa daholo ny mpampiasa fa tsy bot. Noho izany, ny mpampiasa dia hanana ny traikefa tsara indrindra amin'ny soccer.
Ny lalao dia manolotra lalao amin'ny fotoana tena izy, izay hiezahan'ny mpifanandrina aminao hiaro ny fanafihanao sy hanatratra tanjona. Noho izany, tsy maintsy milalao izany ianao amin'ny fampiasana ny sainao sy ny fihetsika haingana amin'ny fanafihana rehetra. ny Lalao 3D manolotra rafitra fanaraha-maso maro, izay azonao ananana, fifehezana feno ny mpilalao.
Ny ekipa tsirairay dia tsy manana afa-tsy mpilalao velona iray, izay tsy maintsy mifehy ny ekipa manontolo. Noho izany, azonao atao ny mitantana ny ekipanao araka ny fomba filalaovanao. Misy mpilalao samihafa azo alaina, ary azonao atao ny manatsara ny fahaizany. Mitantana hetsika isan-karazany ihany koa izy io, izay ahafahan'ny mpilalao mandray anjara sy mankafy milalao amin'ireo mpilalao tsara indrindra.
Ny Mini Football Miniclip dia kianja samihafa misy, izay manolotra karazana tontolo iainana hafa. Manolotra anao tany an-trano izy io, izay ahafahanao milalao ary misy vahoaka marobe mirohondrohona ho anao. Azonao atao ihany koa ny milalao amin'ny sasany amin'ireo kianja tena misy, izay misy amin'ity lalao ity. Izy io dia manolotra ny kianja dimy tsara indrindra, izay fihetseham-po amin'ny fotoana tena izy.
Mba hamboarina ny ekipanao dia misy fananana samihafa azo alaina, azonao ampiasaina amin'ny fandaniana ireo farantsakely. Mora ny manangona ireo vola madinika. Isaky ny lalao dia mahazo vola madinika vitsivitsy ny ekipa mandresy, izay azon'ny mpampiasa ampiasaina amin'ny fanaingoana azy.
Matetika ny olona no mitady ny Mini Football Hack, saingy tsy misy dikan-teny toy izany eny an-tsena. Misy tranonkala fisolokiana sasany, izay milaza fa manolotra ny hack. Noho izany, aza mandany ny fotoananao amin'ny fampiharana toy izany, izay mandany ny fotoananao sy ny volanao.
Raha misy Mini Football Mod Apk misy eny an-tsena, dia fantatrao fa ho azonay haingana ho anao ity toy ny misy eny an-tsena. Aza mitsahatra mitsidika ny tranokalanay ary manohy mampiaraka anay. Azonao atao ny mizaha rindrambaiko mahavariana kokoa, amin'ny tranokalanay.
Manolotra fivarotana an-trano ihany koa izy io, izay manolotra ny fanangonana fananana rehetra. Manolotra fananana mividy izy io, izay azon'ny mpilalao vidiana arakaraka ny filany. Manolotra vatosoa izy io, izay tokony hovidin'ny mpilalao hamaha kitapo, jersey, shorts, ba kiraro, logo ary baoty samihafa.
anarana Football Mini
Size 157.24 MB
Anaran'ny fonosana com.miniclip.minifootball
Mpilalao fotoana tena izy
Easy Fanaraha-maso ny
Vokatry ny feo
Hanova ny fanaraha-maso
Manome fanomezana ny doka
Hozarainay aminareo rehetra ny rohy download. Noho izany, raha te-hisintona ity fampiharana ity ianao dia tsindrio ny bokotra fampidinana. Hita ao amin'ny ambony sy ambany amin'ity pejy ity. Ny paompy tokana dia ampy hanombohana ny fizotry ny fampidinana. Hanomboka segondra vitsy aorian'ny fipihana ny fizotry ny fampidinana.
Ny sehatra tadiavin'ny mpankafy soccer rehetra dia eto. Ao amin'ny Mini, Football Apk dia tia milalao lalao amin'ny mpilalao tsara sasany. Sokafy ny fahaiza-manaon'ny mpilalaoo ary manaova ekipa iray, izay tsy maharesy ny lalao tokana. Asehoy an'izao tontolo izao, iza no mpilalao baolina kitra tsara indrindra ao ambadiky ny fitaovana Android.
Noho izany, mandany fotoana malalaka amin'ity fampiharana ity ary ankafizo isaky ny segondra amin'ny fiainanao. Raha manana olana amin'ny fidirana na fampiasana ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Aza adino ny mitsidika anay indray raha mila fampiharana sy hacks bebe kokoa.
Sokajy Games, Sports Tags Lalao 3D, Mini Football Apk, Mini Football Hack, Mini Football Mod Apk Post Fikarohana